Madda Walaabuu Press: Sagal Obsinee, takkaa Duullaa! Sagal safarree, takkaa Murraa! Sagal of-eeggannee, takkaa haleellaa Sagal qiyyaafannee , takkaa adda keessa buufnaa!!!
Utubaan Manni Oromoon ijaarrachuuf deemuu gadi dhaabbateera. Irree jabaan dhaabbate. Eenyullee buqqisuu mitii, raasuu hin danda’uu. Dagaleen Utubaa walitti qabuus akkasuma rukutamee dhumeera. Hojii itti aanuuf maaltu nu barbaachisaa? jennee mana keenya xumuruu qofaatu nu hafa. Qabsoon Oromoo gonkumaa kan duubatti hin deebinee ta’eera. Oromoon filmaata dhumaatti deemaa akka jiru diinni mataa isaa hubateera. Oromoon qabsoo waliigalaa gaggeessuuf kan eegamaa ture, guutummaatti hojii irra ooleera. Kana booda imalli eegalluu murteessaadhaa. Waan eegallee xumuruuf karaa kan saaquudhaa. kanaaf Dhalli Oromoo qabsoo isaa milkeessuu barbaada taanaan, Naamusaa fi bilchinni keenyaa dachaadhaan dabaluu barbaachisa. Wareegama hanga har’aatti baafne milkeessuuf, obsaa fi murannoon dantaa siyaasa keenyaaf jennee, obsinee waan dursa kennufii qabnuuf dursa kenninee irra aanuuf of qopheessuun murteessaadhaa. Obsi keenya daran kanarra jabaachuu qaba. Diinni keenya innikaa eenyu? jennee adeemsi keenya kanarra jabaatee itti fufu qaba. Oromoon waan eegalee fi itti seenee kana milkeessuuf qabxiilee armaan gadii ilaallachuun hedduu, hedduu barbaachisaadhaa.